Steven Nzonzi Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso
Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola laseFrance Steven Nzonzi Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso
I-LB inikeza iNdaba ephelele yeFrench Football Genius eyaziwa nje ngegama "Nzonzi". Indaba yethu ye-Steven Nzonzi Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sokubuntana kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, isizinda somndeni, ukuphila komshado, kanye nezinye izinto eziningi ezingekho (okungaziwa) ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi uyingxenye ye Amadoda we-23 amaFulentshi athola indebe yezwe ye-2018 eRussia kodwa abambalwa nje babheka i-Bio kaSteven Nzonzi okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
Steven Nzonzi Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Isiqalo sokuphila
Ukuqala igama lakhe eligcwele nguSteven N'Kemboanza Mike Nzonzi. Wazalwa ngo-15th kaDisemba 1988 eColombes, eFrance kubazali bomjaho ohlangene. Ubaba wakhe, uNzonzi Snr uvela eCongo ngenkathi unina enesizukulwane saseFrance.
Ekhulela edolobhaneni laseParis laseColombes, u-Young Nzonzi wayenesiqalo esihle sokuphila kanye nenhlangano ejabule nodadewabo ababili nomzalwane. Noma kunjalo, uyise (owayengamxosha kamuva ukuba ahambe ezinkampanini noma nini lapho ezwa ikusasa elibi lendodana yakhe) wamenza wazi ukuthi ikusasa lingokwalabo abathatha izinyathelo zakuqala.
Ukuqaphela kwambona eqala ukugijima emdlalweni wakhe wezemidlalo e-Racing Paris eneminyaka engu-12 ye-10 futhi wamqondisa emigqumeni eqhubekayo emakilabhu amasha kuhlanganise ne-SC Levallois (1994-1999), eParis Saint-Germain (1999-2002) , CA Lisieux (2002-2003) no-SM Caen (2003-2004).
Steven Nzonzi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Inqubekela phambili yebhola
USteven Nzonzi waqhubeka engaziwa wonke amaqembu akhe abasha ukuthi aqale ukwenza ama-ripples ngesikhathi ejoyina iqembu le-SC Amiens U19 e-2005 futhi wakhuthazwa eqenjini eliphezulu labadlali e-2009.
KwakuseS SC Amiens ukuthi uNzonzi ubonise amakhono amakhulu e-football awenza izwe lakhe laseDongo Congo, eFrance naseNgilandi bafuna ukuvikela izinsizakalo zeqembu lakhe likazwelonke. U-Nzonzi waphenduka phansi kodwa eFrance futhi waqala ukuphuma ngamazwe ngamaFulentshi ngaphansi kwe-21 ithimba ku-2009.
Steven Nzonzi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphakama Ekudumeni
Ukuqhubeka nomsebenzi weqembu, uNzonzi waqhubeka no-Blackburn lapho engenzi lutho. Ekupheleni kwenkathi ye-2011-2012, wajoyina idolobha laseStoke wabe esebenza ngendlela emangalisayo eyamnika umklomelo we-2014-15 Womnyaka ngaphambi kokuthuthela eSvilla ku-2015.
E-Sevilla, iNzonzi ithuthukise futhi yagcina ifomu lakhe eliphezulu, liwina i-UEFA Europa League ku-2016 neqembu futhi yenza i-UEFA Europa League Squad yesizini.
Ukuyithumba yonke inhlonipho isimemo sokudlala eqenjini leFrance National eRussia 2018 Fifa World Cup okuyinto ehlonipha ngayo kanye neqembu le-23. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
Steven Nzonzi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Ubudlelwano
UNzonzi akazange abe nobuhlobo obuhle kakhulu ngezizathu ezingenakulawula. Hlala emuva njengoba sihamba nawe ekuvakasheni ukuthi ulahlekelwa kanjani uthando phakathi nendawo emithathu.
Amazwe aseFrance ayenaSteke City lapho eshada nomkakhe owayengumkakhe, uLynda Nzonzi ku-2013 ngemuva kwezinyanga zokuthandana obegcinwe ngasese. Konke kwabonakala kahle ngomshado wabo owawubusiswa ngendodana u-Ayden. Izinyanga ezingu-4 ngemuva kokuzalwa kwendodana yabo, uNzonzi uvele enkantolo icala ngemuva kokuba umkakhe ammangalele ngokumshaya phambi kwengane yakhe ngokumbiza ngokuthi 'uDady' ongenamsebenzi.
Ukuphendula icala uNzonzi wagcizelela ukuthi wayezama nje ukuzolahla umkakhe (owayebonakala efutheka kakhulu) ngokubamba izibhamu ngemuva kokumbiza njengento engenalutho ngesikhathi wengxoxo yefoni nomama wakhe
UNzonzi ukuzivikela kwahamba kahle namantji eNingizimu Cheshire, amsusa ngokushaya. Ngosuku olulandelayo icala likaLynda elinikeze isahlukaniso noNzonzi liqinisekisa ukuhlukaniswa ngokuqaphela ukuthi umshado wabo 'uhlehlisiwe ngokungenakuqondakala'.
Steven Nzonzi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuqhathaniswa noPatrick Vieira
USteven Nzonzi usephelile isikhathi, uma eqhathaniswa ne-Arsenal legend uPatrick Vieira abaningi abandakanya iSpanish Press. Ukuhlaziywa ngokucophelela kokuqhathaniswa kwembula ukuthi akugcini kakhulu futhi ikakhulukazi kudingekile ngesikhathi salokhu okuthunyelwe lapho i-Vieira isethelwe ukushiya i-Sevilla ye-Arsenal.
UPatrick Vieira, okwamanje umphathi weNicon ube ngumdlalo webhola osebenza kahle e-Arsenal njengomdlali ophakathi, isikhundla sikaNzonzi sizifezile. Kusukela ku-Vieira eshiye iqembu ku-2005, i-Arsenal isitholile kunzima ukuthola umdlali ophakathi ophethe isilinganiso esiphelele sobukhulu be-Vieira esitholwe eNzonzi.
Ngaphezu kwalokho, bobabili i-Vieira ne-Nzonzi yizibalo ezinamakhompi ayenokuqala ukuphakama kwe-1.93m kanti lesi siphezulu sithatha kancane nge-1.96m !. Ukuzithumba bonke bobabili abantu banqobe indebe yomhlaba yeFIFA neqembu leFrench National.
Kodwa-ke, uNzonzi akacabangi ukuthi ulinganisa nomlando njengoba ephawula ukuthi:
Ngimude, ngidlala indawo efanayo futhi nginguFrench ngesibili, ungenza ukuqhathanisa kodwa angiqiniseki ukuthi kulungile ngoba kuyoba nzima ukufanisa lokho akwenzile, '
Steven Nzonzi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukubambisana okungaqiniseki
Nakuba uNzonzi esebenze okuningi ukuze angaboni izingxabano, izenzo zakhe ngemuva kwehlazo likaSevilla 5-0 iBarcelona ekugcineni kweSpein Cup ku-2018 yenza abalandeli bazibuze ukuthi ubuqotho bakhe bulele kuphi. USevilla wayesebenze kanzima ukuze afike ekupheleni kokugcina kweNdebe Cup yaseSpain ukuze atshaywe yiBarcelona ngekhasi elenza ukuthi iqembu livele libuthakathaka.
Ekupheleni komdlalo, uNzonzi wenza iphutha ngezibalo ezimbili, Okokuqala ukwenqaba ukubonga abalandeli ngokusekela kwabo ngokubambisana kwabo bonke emkhankasweni wekomishi waseSpain kanti omunye, okwakudabukisa isinqumo sakhe sokubamba iqhaza e-nightclub yaseMadrid ngosuku uhlangothi lwabhekwa kakhulu.
Ukuqaphela i-ruckus eyabangelwa isinqumo sakhe abaningi abachazwa njengabantu abangacabangi, uNzonzi eyamthatha eyayibeka ku-tracksuit yaseSevilla (ukuhamba okucashile ukufakazela ukwethembeka kwakhe) okuchaza ukuxolisa okufundiwe:
"Ngifuna ukuxolisa kwabathandi beSevilla," kusho uNzonzi. "Ngenze iphutha ngoba ngishiya ngemuva komdlalo. Okwenzekile nakho kunzima kubadlali. Sidlala njalo emva kwezinsuku ezintathu, ngihlala ngedwa, ngiqeqesha futhi ngibuyela ekhaya. Ngihlala ekhaya. Izolo umndeni wami nabangane babekhona futhi ngashiya. "
Steven Nzonzi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ubuhlobo Nendodana
USteven Nzonzi uqhubeke nokugcina ubuhlobo obuseduze nobaba wakhe nendodana yakhe, u-Ayden kungakhathaliseki ukuthi umshado wakhe uphukile. Ubaba oziqhenyayo ongakatholi ubuhlobo obunjalo akayekanga ukulayisha izithombe ezithandwayo yena nendodana yakhe kuhlanganise nesibhamu esibonisa ukuthi ugubha amaqhawe akhe eNdebe yoMhlaba nge-Ayden.
Steven Nzonzi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Izindaba zobuntu
Ubuntu bukaNzonzi buningi obukhulu bokuthi umuntu akakwazi ngempela ukufika esiphethweni ngokuqondene nokuthi ungubani ngempela. Noma kunjalo, uNzonzi uye wacacisa ukuthi uvame ukubonisa ukuziphatha okuzolile ngaphandle kokugxeka nokucindezeleka emkhakheni wokudlala.
'Ngizibuyiselwe emuva empilweni kodwa ngigxile, ngingathola ukukhathazeka ngempela nokucindezeleka, kukhona umehluko omkhulu. Nginzima kakhulu kimi, njalo ngiye. Angithandi ukudlula okulahlekile. Ngiyilawula kangcono manje kodwa nokho, ngezinye izikhathi ngiyakhungatheka ngokushesha. '
Steven Nzonzi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ezinye Amaqiniso
UNzonzi ubelokhu ephupha ngokudlala eqenjini lezemidlalo, iphupho elibukeka lifinyeleleka njengoba ebeka izitimela ze-arsenal.
Ngesikhathi uNzonzi ese-Stoke City wahlanganisa ama-134miles emidlalweni ye-19, ibanga elimhlukanisa nabanye abadlali.
Ama-akhawunti akhe ezokuxhumana nabantu alawulwa yi-Life career yakhe.
Uphikelela ukuthi igama lakhe lifakwe njengoNzonzi, hhayi uNZonzi
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu ye-Steven Nzonzi Childhood kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.
I-Stoke City Football Diary
I-Hugo Lloris Ingane Yomlando I-Untold Biography Facts
UFranck Ribery Udaba Lwabantwana I-Untold Biography Facts